Nyocha nke Moto X | Gam akporosis
Mmetụta mbụ na Moto X ọhụrụ
Anyị na-aga n'ihu igosi gị ozi niile Motorola gosipụtara anyị na Hotel de Rome na Berlin. Ọ bụrụ na ụnyaahụ ị anyị na-ekwu maka Moto G ọhụrụ, taa ọ bụ oge ime a nnyocha zuru ezu nke ọhụrụ Moto X, pearl ojii ọhụrụ si n’aka ndị nrụpụta.
Nhazi nke Moto X ọhụrụ dị ka nke onye bu ya ụzọ, n'agbanyeghị na nnukwu ụzọ. Na nke a, 5.2 ihuenyo ya bụ isi na-akpata ya, mana Motorola na-eme ka ihe dị mma nwee obi ụtọ na ekele ya n'akụkụ akụkụ ya na-ekwe ka a mma adịgide nke ngwaọrụ.
Otu nkọwa anyị masịrị bụ ígwè etiti nke na-ekpuchi ngwaọrụ ahụ, na-enye ọhụụ mbụ ahụ maka Moto X ọhụrụ nke ndị nrụpụta na-amasị n'oge na-adịbeghị anya. Njikwa olu na bọtịnụ ike dị n'akụkụ aka nri, ebe n'ihu anyị hụrụ ndị na-ekwu okwu stereo na-enye ngwaọrụ ahụ ọdịyo dị elu karịa nke mbụ Moto X.
1 Njirimara na nkọwa nke Moto X ọhụrụ
2 4K igwefoto ndekọ
3 Sọftụwia, isi ike nke ọhụrụ Moto X
4 Mkpebi, ụbọchị ntọhapụ na ọnụahịa nke Moto X ọhụrụ ahụ
Njirimara na nkọwa nke Moto X ọhụrụ
Akụkụ: 140,8 x 72,4 x 9,9 mm
Arọ: gram 149
Ihuenyo: 5,2-inch AMOLED nwere mkpebi zuru oke HD, njupụta nke 423 dpi yana nchekwa Gorilla Glass
Ihe nhazi: quad-isi Snapdragon 801 na 2,5GHZ
Ncheta RAM: 2 GB
Nchekwa dị n'ime: 16GB / 32GB
Batrị: 2.300 mAh
Igwefoto azụ: megapixels 13 na-enyekwa nkwado vidiyo na ogo 4K oyiyi
Android Kit Kat 4.4 sistemụ nrụọrụ
4K igwefoto ndekọ
Otu n'ime mmelite kachasị mma nke ọhụrụ Moto X na-abịa na igwefoto ya. Na nke a anyị na-aga site na ihe mmetụta 10 gaa na otu n'ime 13 megapixels, imeziwanye oghere site na f2.4 ka f.2.2 yabụ ị ga - ewe foto kacha mma na gburugburu ọkụ adịghị mma.
Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, ha etinyela ọkụ ọkụ ọkụ abụọ, na mgbakwunye na enwere ike idekọ vidiyo na mma 4K. N'ezie, ihe onyonyo ahụ na-akụtụ ntakịrị, ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere ndị ọzọ dị arọ dị ka Galaxy S5, mana ọ nweghị ihe ezigbo mmelite nwere ike idozi.
N'ihe banyere igwefoto igwefoto, ndi otu Motorola agbakwunyela ihe ole na ole. Dịka ọmụmaatụ, ị ga-ahụ obere oghere dị gburugburu nke ị nwere ike iji lekwasị anya n'akụkụ ụfọdụ tupu ị gbaa égbè. Ga-enwekwa ohere nke iwepụta onwe gị site na iwu olu.
Igwefoto nke ọnụ na-eweta ihe ọhụụ na-atọ ụtọ: dị nnọọ ịma jijiji iji malite ya wee metụ ebe ọ bụla na ihuenyo iji see foto. Ọ gaghị abụ ọsọsọ!
Sọftụwia, isi ike nke ọhụrụ Moto X
Obi abụọ adịghị ya, otu n'ime ebe nkiri kachasị nke ọhụrụ Moto X na-abịa na ngwanrọ ya. Iji malite, ọ na-abịa na gam akporo dị ọcha, enweghị akwa ma ọ bụ nhazi, na nke a ọ bụ gam akporo 4.4.4 onye na-ahụ maka ime Motorola smartphone ọhụụ.
Dị ka ọ bụ omenala maka Motorola, nke a pụtara na ị ga-eso n'etiti ndị mbụ na-enweta mmelite ngwanrọ, ihe ọtụtụ n'ime anyị nwere ekele. Na Ngwa nke Motorola nwere ezigbo mma.
Anyị ga-amalite site n’ikwu banyere Olu Moto, nke na-enye gị ohere ịhazi ụzọ ị si eme ka olu rụọ ọrụ. Bilie Kit!, Morningtụtụ ọma Moto X! Ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ ịgbalite iwu Google Voice, na-ahapụ ịhapụ ndị Google na-agwụ ike. Ọ na - enye gị ohere ịkọwa mmelite Facebook ma ọ bụ ozi WhatsApp n'etiti nhọrọ ndị ọzọ.
Ekwesiri ighota na Moto X ohuru nwere ihe mmetụta nke di n'ihu ya nke gha enyere gi aka ịza ma ọ bụ kpọọ oku, megharịa ma ọ bụ mechie ihuenyo ahụ, n'etiti ọrụ ndị ọzọ, naanị site na ịfefe aka gị, na-enweghị metụta ngwaọrụ ahụ, ekele maka ngwa ya Omume Moto.
Moto Inyere bu ihe ozo mara nma nke oma. Site na ihe mmetụta dị iche iche na igwe okwu nke Moto X ọhụrụ jikọtara, ngwaọrụ ahụ ga-ama mgbe ị na-ehi ụra na, dịka ọmụmaatụ, ọ ga-ada ụda mgbe kọntaktị ị hazie dị ka ihe dị mkpa na-akpọ gị. Ma ọ bụ ọ ga-achọpụta ma ọ bụrụ na ị na-akwọ ụgbọala na-akpaghị aka rụọ ọrụ ụgbọ ala mode.
Mkpebi, ụbọchị ntọhapụ na ọnụahịa nke Moto X ọhụrụ ahụ
The naanị nnukwu ma na m na-ahụ nwere na-eme na Moto Onye kere. Echere m na ọ bụ ọrụ magburu onwe ya, nke na-enye gị ohere ịhazi ekwentị gị nke ọma, na eziokwu ahụ Motorola enweghị atụmatụ taa ịmalite ọrụ a na Spain Ọ dị m ka ọ bụ ihie ụzọ, ọ bụ ezigbo ihe ihere na mba anyị anyị enweghị ike iji ọrụ a mee ihe.
Ma n'ikpeazụ O meela ka anyị na-anụcha ụtọ n’ọnụ anyị. Ezi mechara, ngwaike dị ike, sọftụwia ọhụụ na ọnụahịa ezi uche dị na ya. Otu n'ime njedebe kachasị elu nke oge a. Enweghị mgbagha ọ bụla.
Ihe ọhụrụ Moto X ga-abata na Spanish ahịa si October 1 na ọnụahịa nke euro 499 maka ụdị na 16 GB nke nchekwa, ma ọ bụ euro 579 maka ihe nlereanya na 32 GB. Ugbu a ọ ga-adị na ọcha, ọ bụ ezie na a na-atụ anya ka ọtụtụ agba ga-abawanye n'ime ọnwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Motorola » Mmetụta mbụ na Moto X ọhụrụ
Josue Aristi dijo
Ezigbo nyocha nke ekwentị magburu onwe ya! Mana ka m siri mara na ọ kwadoghị kaadị SD.
Zaghachi Josue Aristy
Budata ududo-Man Unlimited maka n'efu
Otu esi zoo data na gam akporo na uzo di oso ma di mfe